Malagasy Rugby : anisan’ireo ho kandidà Rakotomalala Marcel | NewsMada
Malagasy Rugby : anisan’ireo ho kandidà Rakotomalala Marcel
Ho fanohizana ireo asa efa natomboka sy fanatanterahana ireo tetikasa, izay tsy mbola tafapetraka tsara, nilaza ny filohan’ny Malagasy Rugby, Rakotomalala Marcel fa mbola ho anisan’ireo kandidà, hirotsaka hofidina ny tenany. Ny fifidianana izay hovitaina alohan’ny 15 oktobra ho avy izao.
Nambarany àry fa hisy ny fifidianana hifantenana na “pré-election”, ka izay kandidà mahazo ny 1/3 n’ny vato no afaka fidiana. Hisy komity manokana, tarihin’ny solontenan’ny minisitera sy ny Komity olympika ary ny solontenan’ny orinasa mpanohana, mpilalao fahiny sy ny maro hafa, hiandraikitra ny fifidianana. Ireo ligim-paritra 13 miampy, sy ireo klioba tompondaka farany isaky ny sokajy no mandatsa-bato.
Nohamafisiny fa tokony ho vita ny faran’ny volana jolay izao ny eny anivon’ny klioba ary ny alohan’ny 22 aogositra ny an’ny seksiôna raha ny 13 septambra ny an’ny Ligy.
Tsiahivina fa efa tapitra tamin’ny fivoriambe ara-potoana teo ny taom-piasana, ho an’ny Malagasy Rugby, saingy mbola manohy ny asa aloha, hatreto, ireo mpitantana am-perinasa, mandra-pahavita ny fifidianana.
Nanao ny tatitra ny taom-piasany ihany koa Rakotomalala Marcel izay nolazainy fa saika tanteraka avokoa. Anisan’izany ny fametrahana ireo rafitra fototra rehetra, izay tsy nisy teo aloha. Marihina fa misy mpiasa 19 ao amin’ny Malagasy Rugby, ankehitriny, miasa ao amin’ny birao sy eny amin’ny kianja Makis. Teo koa ireo tetikasa fampandrosoana, izay nahazoana sitraka tamin’ireo rafitra, iraisam-pirenena. Ary zava-dehibe indrindra ny nahavitana nandray ireo fihaonana iraisam-pirenena, izay tsy nidiran-trosa.